Guddiyada Dutchtown • DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
Ururada Dutchtown waxay aasaaseen qaab guddi ah oo loogu talagalay horumarinta jaaliyadaha ee xaafada. Mashruuca Guddiyada Dutchtown waa dadaal wadajir ah oo u dhexeeya Wadooyinka Waaweyn ee Dutchtown, ka Degmada Horumarinta Bulshada ee Dutchtown, Iyo Initiative Wadooyinka Muhiimka ah ee St. Louis.
Iyadoo mashaariicda qaarkood ay diiradda saari doonaan raadraaca CID ee Dutchtown ama aagga bartilmaameedka Waddooyinka Muhiimka ah ee St. Louis, waxaan sidoo kale ka shaqeyn doonnaa mashaariicda lagu beegsanayo aagagga ballaaran ee xaafadda. Waxaan ku dhiirigelinaynaa deganayaasha iyo milkiilayaasha ganacsiga ee ka kala yimid dhammaan Dutchtown inay ku biiraan hal ama dhowr guddi oo ku habboon danahaaga.
Haddii aad haddaba diyaar u tahay inaad isqorto, waad awoodaa si toos ah ugu bood foomka isdiiwaangalinta.
Dhammaan guddiyadu waxay kulmayaan 6-da fiidnimo iyagoo adeegsanaya Kooxaha Microsoft ama NICstl at 3207 Meramec. Waxaad ka heli kartaa taariikhaha kulanka, ama Kalandarka Dutchtown.
Guddiga Naqshadeynta wuxuu ka shaqeeyaa hagaajinta walxaha jirka ee xaafadda, isagoo ilaalinaya dabeecadda dhabta ah ee bulshada iyo dareenka booska. Guddiga Naqshaduhu wuxuu ka shaqeeyaa mashaariic daboolaya farshaxanka, ilaalinta, qurxinta, iyo badbaadada. Inta badan Qorsheynta iyo shaqada Guddiga Naqshadeynta waxaa lagu sameeyaa guddi hoosaadyo—la xiriir guddoomiyaha guddiga si aad u ogaato sidii aad uga qayb qaadan lahayd.
Guddiga Muhiimadda Dhaqaalaha
Guddiga Muhiimadda Dhaqaalaha wuxuu xoojiyaa oo? Kala-jaadiyaa dhaqaalaha maxalliga ah isagoo taageeraya ganacsiyada hadda jira ee Dutchtown, dhiirrigelinta ganacsiga xaafadda, iyo raadinta horumar ku habboon. Waxaan la shaqeyn doonnaa milkiileyaasha ganacsiga ee hadda jira iyo kuwa mustaqbalka, milkiilayaasha guryaha la daggan yahay iyo kuwa ganacsiga, iyo dhinacyada kale si aan ugu keenno Dutchtown maalgashi iyo dhaqdhaqaaq dhaqaale.
Wuxuu kulmaa Talaadada labaad ee bil walba 6da galabnimo.
Guddiga Dallacaaddu waa qaybta suuqgeynta ee Dutchtown. Waxaan ka helnaa ereyga ku saabsan waxqabadka, dhaqanka, ganacsiga, iyo nolosha bulshada, suuq geynta hantida Dutchtown, waxaanna u siyaadinaynaa muuqaal wanaagsan xaafadda. Waxaan abaabulnaa munaasabado, waxaan dhiirrigelinnaa ganacsiyada maxalliga ah, waxaanna horumarinnaa sumcad iyo joogitaan Dutchtown ah.
Wuxuu kulmaa Khamiista labaad ee bil walba 6da galabnimo.
Ujeeddada Guddiga Ururka waa in la isku soo dhoweeyo bulshada si loo dhiso is afgarad iyo aragti guud, isu soo uruurinta kheyraadka, loona hoggaamiyo nooleynta. Gudigeenu wuxuu mideeyaa mutadawiciinta, lacag aruurinta, iyo shabakadaha isgaarsiinta ee wax walba ka dhiga.
Wuxuu kulmaa Talaadada seddexaad ee bil walba 6da galabnimo.
Guddiyada Dutchtown waxay ka warbixiyaan guddiyada Dutchtown Main Streets iyo Dutchtown CID. Guddiyadu waxay kaloo raadiyaan fikrado kala duwan ee daneeyayaasha bulshada, qof kasta oo raba inuu ka qaybqaato wuxuu ku biiri karaa guddi.
Diyaar ma u tahay inaad Saxeexdo?
Buuxi foomka hoose guddigayaasheena ayaa kula soo xiriiri doona.
Magaca hore *
Design Muhiimadda Dhaqaalaha Ururka Gudbinta Hubi gudiyada aad xiisaynayso.
Saxeex liiska liistadayada? Haa Maya Waxaan kaliya u dirnaa dhowr emayl bil kasta.
Fadlan ha buuxin arimahan.
Foomkani wuxuu adeegsadaa Google reCaptcha v3 si looga hortago spam. (Fiiri Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah iyo marka la eego adeegga)
La wadaag boggan Facebook, Twitter, ama maraya Email. Boggan waxaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay January 7th, 2022 .
DutchtownSTL.org Guddiyada Dutchtown